Author: Dijas Metilar
Ammaanka ayaa aad loo adkeeyeycabsi laga qabo in si la mid ah dii ay rabshado ka dhacaan dalka. Shir ku saabsan dastuurka cusub ee Soomaaliya oo soo idlaaday iyada oo uu madaxweynuhu ballan qaaday in la dardar gelin doono hannaanka dib-u-eegista.
Qodobka 5aad — Afka Somslia ah 1. Dhanka kale, xiritaanka shirka maanta ayaa Wakiilka Xog-hayaha Qaramada Midoobay ee Soomaaliya Michael Keating ku ammaanay dowladda Soomaaliya dadaalladeeda ku aaddan la-imaatinka jadwal ku dastuurka cusub. Macnaha erayga Rastafari Ras iyo Tafari.
Dadka rumaysan diinta Rastafari waxay aaminsan yihiin Xeyle Salaase inuu abuuri doono aduun cusub si uu wanaaga ugu hogaamiyo aduunka, waxayna u yaqaanaan aduunkaas Zion, caasimadda Zion waxay ku sheegeen inay ku taalo waqooyiga Itoobiya halka la yiraahdo Lalibela, waxayna ugu magac dareen Jurisalaamta Cusub. Gaashaanka dastuurk waxaa ku yaal rurkumo carbeed oo xardhan, lehna shan madax oo dahabi ah oo labada geesba ku yaalliin ay kala qaaran yihiin. Waxaa sidoo kale laga taxadaray qaabka loo xalinayo khilafaadka ka dhasha doorashooyinka, waxaana uu ku tallinayaa dastuurka cusub in la sameeyo maxkamad gaar ah, oo xalisa khilaafaadka doorashooyinka, iyadoo aanan xil loo dhaarin doonin madaxweyne inta cushb xalinayo khilaafka.
Diin aan ahayn Islaamka laguma faafin karo dalka. Sabtidii waxaa la soo xiray kalfadhigii 7-aad ee baarlamaanka federaalka, waxaa la sheegay in la dhameystirayo cutubyada dhiman sida 5, 6, 7, 8 iyo naad, kadibna guddiga dib u eegista dastuurka ee baarlamaanka iyo guddiga madaxa banaan ee dib u eegista dastuurka ay aadi doonaan gobollada dalka iyadoo ay ku wehlinayaan xildhibaanada gobolkaas ka soo jeeda si shacabka loogala tashado arrimaha dib u eegista dastuurka kadibna waxaa dastuurka lagu soo celin doonaa baarlamaanka si ew walba xildhibaan u ansixiyaan.
Dastuurrka 15aad Sugidda Nabadda iyo Ammaanka Qaranka. Madaxweynaha waxaa uu xilka la wareegay kii. Qodobka aad-Bannaanaanta Xafiiska Madaxweynaha. Qodobka aad-Awooda Madaxweynaha Awoodaha madaxweynaha waa: Cutubka 4aad Waajibaadka Jamhuuriga ah.
Dastuurka cusub, oo ay taageerayaan Madaxweynaha dalka Mwai Kibaki iyo Raisal Wasaaraha Raila Odinga, ayaa waxaa uu si weyn wax uga badalayaa awoodda madaxweynaha, qaabka loo qeybsanayo kheyraadka waddanka, waxaa uuna abuurayaa aqal cusub oo senate-ka iyo dowladdo hoose oo awoodooda la xoojiyey.
Kuwani waa bogag dibedda ah, waxayna ku furmayaan bog cusub. Waxaa ay shuruudda ku dareen in uu ka dhashay qabiillada dalka degan, weli in uu Afrikaan asal ah yahay. Email or Phone Password Forgot account? Nambarada qodobada hoose waxay la socodaan numbarada qodobada baarlamentaariga.
Cutubka 13aad – Hay’adaha Dowlad-Goboleedyada. Qodobka 6aad — Astaanka Qaranka 1. Madaxweyne ku-xigeenka haddii uu geeriyoodo, iscasilo ama xilka laga qaado A fhayeenka Golaha Shacbiga ayaa la wareegaya xilkiisa. Dalka Masar tusaale ahaa sanadkii kii waxaa doorashada laga reebay Sheekh Xaasim Abuu Ismaaciil, ma aheyn in Sheekh Xaasim uu dhalasho kale heystay laakin waxaa looga reebay markii la ogaaday in hooyadiis ay heshay Green Card mar ay booqasho ugu tagtay gabadheeda oo deganeyd dalka Mareykanka.
Burundi opposes AU calls to withdraw troops in Somalia December 24, Wassiirka la magacaabay haddii uu xubin ka yahay labada Aqal midkood ama uu hayo xil guud ama mid gaara ah, waa in uu iska casilaa kursigiisa 90 casho gudahood kadib markii loo dhaariyo xafiiska 2 Madaxweynuhu marka uu dhisayo Golaha Wasiirrada waa in uu tixgeliyaa qaybaha ay ka kooban tahay bulshada Soomaaliyeed.
Qodobka aad-Bannaanaanta Xafiiska Madaxweynaha 1 Haddii Madaxweynuhu geeriyoodo, iscasilo ama laga qaado xilka, madaxweyne-ku-xigeenka ayaa la wareegaya xilka madaxweynaha. Marka aan hoos ku faahfaahiyo qofka qoray dastuurka Soomaaliya loo diyaarinayo, halka ay cuub jeedo, waxa ay aaminsan tahay, iyo diinteeda markaas ayaa qof walba ogaan karaa xaaraanimada dastuurkaan iyo bahdilka Soomaalida lala damacsanaa mudo dheer.
Qodobka in laga fiirsado u baahan waa 88aad ee shuruudda doorashada madaxweynaha, laakiin inta aan qodobkaas ka hadlin, u fiirso dastuurka qodobkiisa 8aad faqradiisa 3aad oo u qoran: Cutubka 9aad Laanta Fulinta ee Federaalka. Diintaas ayay aaminsan yihiin gabadha iyo ninkeeda ee qoray Dastuurka Soomaaliya.
Cutubka 5aad Dhul, Hanti iyo Degaan. Cutubka 12aad Heerarka kala Duwan ee Shaqaalaha dowladda ee Rayidka. Qodobka 98aad-Xil-ka-qaadista Madaxweynaha 1 Madaxweynaha Jamhuuriyadda waxaa xilka looga qaadi karaa oo keliya marka uu ku xadgudbo dastuurka, ku tagri-falo awooda xafiiska ama uu galo khiyaamo qaran. Maqaamkma Xomalia madaxdu ay ku leedahay qaabdhismeedka federaalka ee Jamhuuriyadda wuxuu ku xusan yahay Cutubka 7-aad ee Dastuurka. Cutubka 14aad Maaliyadda Guud.